Q&A - Vondrona UP
Afaka manome serivisy OEM ve ianao?
Eny, misy izany
Ahoana ny mombamomba ny antsipirian'ny vokatrao?
Afaka manome masontsivana teknika lehibe izahay, fahombiazana, firafitry ny vokatra sns arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Afaka manome fiofanana mialoha ny varotra ve ianao?
Azo atao izany raha mbola mila ny mpanjifa
Misy serivisy aorian'ny varotra?
Raha simba ny vokatra noho ny tsy fanoloran'ny mpanjifa azy, ny mpanjifa dia tokony hitondra ny vidiny rehetra ao anatin'izany ny vidiny sy ny sarany fandefasana entana sns, mandritra ny vanim-potoana fiantohana, na izany aza, raha simba izany vokatry ny tsy fahombiazan'ny orinasa mpamokatra entana, dia hanome onitra na fanamboarana maimaim-poana .
Ahoana ny fametrahana sy ny fiofanana?
Afaka nanome mpanjifa fametrahana sy fampiofanana maimaimpoana izahay, saingy tompon'andraikitra amin'ny tapakila mandroso sy miverina ny mpanjifa, sakafo eo an-toerana, toeram-ponenana ary karama injeniera.
Ahoana ny fe-potoana fiantohana kalitao?
Ny fe-potoana fiantohana kalitaon'ny vokatra dia 12 volana aorian'ny nandaozany ny seranan-tsambo sinoa.
Ahoana ny fandoavana?
Matetika ny T / T sy ny L / C tsy azo ovaina amin'ny fahitana ampiasaina any amin'ny orinasa kanefa, misy faritra sasany mila manamafy ny L / C amin'ny antoko fahatelo araka ny takian'ny banky sinoa.
Homena anao ny vidiny tsara indrindra raha toa ka mpivarotra ianao na mpampiasa farany.
Amin'ny ankapobeny, ny fotoana fandefasana ireo fitaovana mahazatra dia 30-60 andro aorian'ny nahazoana ny petra-bola. Na izany aza, ho an'ny fotoana fandefasana ireo fitaovana manokana na lehibe dia 60-90 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola.
Afaka manome santionany maimaimpoana ve ianao?
Tsy manome santionany amin'ny milina feno izahay. Mba hanohanana ireo mpaninjara sy mpanjifantsika, dia hanome vidiny manokana ho an'ireo milina vitsivitsy voalohany sy santionany amin'ny fihinana fanontana izahay, fa ny entana kosa dia tokony ho entin'ny mpaninjara sy ny mpanjifa.